I-Mystagoge Retreat enechibi elingaphantsi komhlaba / i-jacuzzi - I-Airbnb
I-Mystagoge Retreat enechibi elingaphantsi komhlaba / i-jacuzzi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguArtemia
I-Mystagoge Retreat yindlu yemveli ekhethekileyo, enokuhlala abantu ababini.
Iphuli yomqolomba eshushu yabucala enejacuzzi iya kuba ilinde ukuba unikezele ngamava amangalisayo.
Ibhasikithi ekhanyayo yasekuseni kunye ne-rusks, i-jam, ubusi, ikofu yeti, ubisi kunye nebhotela.
Izinto eziluncedo ezibandakanyiweyo yi-WI-FI, i-air-conditioning, kuzo zonke iindawo zendlu, indawo yokupaka yasimahla, iyadi yemveli ezaliswe lilanga ngeebhedi zelanga, indawo yokutyela kunye ne-BBQ ekwabelwana ngayo.
Inegumbi elinye lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye ne-wardrobe, igumbi lokuhlala elinesofa eyakhelwe-ngaphakathi kunye ne-TV ye-LED, igumbi lokuhlambela elineshawa, kubandakanya iimveliso zokhathalelo, isomisi seenwele kunye nomatshini wokuhlamba. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo sisitovu, iketile, ifriji enkulu, umatshini wekofu, itoaster, isitya, kunye nezinto zokuthambisa.
Ngaphakathi kwimiqolomba yeMystagoges unokuziva ubuni obukhethekileyo bezindlu zasekhaya. Indawo yethu yokuhlala yayiyeyokuqala ivenkile yokubhaka kule lali yalungiswa emva koko kuhlonelwa indlela eyilwe ngayo.
Inkonzo yokudlulisa ukuya / ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya / izibuko, ukuqesha imoto / ibhayisekile, uhambo lwecatamaran, ukukhwela amahashe, ukuphulula konke okufumaneka ngentlawulo eyongezelelweyo naxa uceliwe.
Yonwabela ukuthula kwindlu yomqolomba yokwenyani enazo zonke izinto ezinobunewunewu eziza kwenza ukuba iiholide zakho zikhumbuleke!
IMystagoge Retreat ikwilali entle ye "Vothonas", indawo efanelekileyo embindini wesiqithi, ekulungeleyo ukuhambahamba.
UFira luhambo olufutshane kuphela (4km), isikhululo seenqwelomoya (2km) kunye nezibuko (7km).
"I-Vothonas" ayiyona nje indawo enhle, kodwa ithuba lokufumana indlela yokuphila yaseSantorini yasekuqaleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Artemia
Inombolo yomthetho: 00001202898
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vothonas